Free Fire မှာ အသုံးပြုရန် အ‌ကောင်းဆုံး Character ၆ ကောင် | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Free Fire မှာ...
Free Fire မှာ အသုံးပြုရန် အ‌ကောင်းဆုံး Character ၆ ကောင်
Battle Royale Scene ဆက်လက် မြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှ Free Fire က သူရဲ့ တစ်မှု ထူးခြားတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ အတူမြင့်တက်လျက်ရှိနေတာကို တွေ့ရတာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲမှာ တိုက်နေတုန်း အကောင်တိုင်းမှာ သူ့တို့ရဲ့ ထူခြားတဲ့ Skill တွေရှိလို့ ရှိတာကြောင့်ရယ်နဲ့ အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းနိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ်။
Character ပေါင်း ၃၀ ကျော် ရှိတာကြောင့် သင်တို့ရဲ့ ကစားပုံနဲ့ တူညီတာကို ရွေးချယ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။
သင်က AR ကို စိတ်၀င်စားတယ် ဆိုရင်တော့ Underworld ရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်တဲ့ Paloma ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သူမက Assault Rifles ကိုင်တာအရမ်းတော်ပါတယ် (SKS and Groza တွေက သူမရဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေပါ! ) ။ သူတို့ရဲ့ ရန်သူတွေအတွက် အထူးသတိပေးချက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်တာ အလွန်တော်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ Inventory ထဲမှာ သူကြိုက်တာတွေထည့်ဖို့ နေရာတွေ ပိုပါပါတယ်။ လက်ပစ်ဗုံးတွေနဲ့ First Aid Kits တွေပိုသယ်နိုင်တာကြောင့် တိုက်ခိုက်လို့လဲရသလို အသက်ရှင်ရေးလည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါဘဲ။
Cost: ၄၉၉ Diamonds
Rush Hour Battlefield တွေမှာ Alok က စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေကို ယူဆောင်လာပါပေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Drop the Beat လို့ခေါ်တဲ့ Skills က heal လုပ်ပေးနိုင်ပြီး သူနဲ့ သူ့ အသင်းသားတွေကို လျှင်မြန်စွာ သွားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Offence နဲ့ Defence အသုံးပြုချင်ရင်တော့ Alok ကို သင် အသုံးပြုဖို့ ကွက်တိပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ Ability က တစ်သင်းလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီး အရေးကြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆိုရင် ခုခံအားလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုလုံးမှာ သူက အင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Cost: ၅၉၉ Diamonds
အပြေးမြန်တဲ့ Kelly က တော့ Human Dynamo တစ်‌‌ယောက်လိုပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ အားကစားစွမ်းရည်ကတော့ ပြေးတာဖြစ်ပြီး Loot တွေကို ခိုးယူပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာကို အမြန်ပြန်ပြေးဖို့ သူက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Skill တွေကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ သင်အသင်းမှာ သင်က Scout တစ်‌ယောက် တာ၀န်ရှိရင်တော့ Kelly က သင့်အတွက်ပါဘဲ။
Cost: ၃၉၉ Diamonds
Jota ကို သင်ရွေးချယ်ရင်တော့ သူက Shortgun နဲ့ SMG ကို ကျွမ်းကျင်ပြီး သင်ကို သတ်ဖို့ ခတ်ခဲမယ်လို့တာ မှတ်ယူထားနိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ Raid Skills က Shortgun ဒါမှမဟုတ် SMG ကို သုံးရင် အမြင့်ဆုံး အဆင့်မှာ 40HP ထိ ရန်သူကို ထိနိုင်ပါတယ်။ ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်မှာ အသက်ရှင်ရေးစဥ်းစားနေရင်တော့ သင်ကဂိမ်းအတွက် တန်ဖိုးရှိသောသူတစ်ဦး ဖြစ်မှာပါ။
ဂိမ်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Character အသစ်ဖြစ်သလို ဒီ အောင်မြင်လာတဲ့ ဘောလုံးသမားလေးကတော့ Hat Trick လို့ခေါ်တဲ့ သူ့ရဲ့ Skills နဲ့ အမှတ်တွေကို မြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lugueta ရဲ့ Kill တိုင်းက သူ့ရဲ့ HP ကို 8 က နေ 35 အထိ မြှင့်ပေးသွားမှာပါ။ သင်က Kill များများ သတ်နိုင်လေ သင့်ရဲ့ Health က 230 HP မှာ ဘဲ Heal သရွေ့ ရှိသွားမှာပါ။ Alok နဲ့ တစ်ဖွဲ့ထဲ နေပြီး ဂိမ်းထဲမှာ အကောင်းဆုံး တတ်ညီလက်ညီ ကစားလိုက်ပါ။
Cost: Character Royale မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီ ပိန်ပိန် ရှည်ရှည် ဆယ်ကျော်သက်ကတော့ သင့်ရဲ့ ပင်တိုင် Streamer / Esports ကစားသမား တစ်ဦးဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Limelight လို့ခေါ်တဲ့ Wolfrahh ရဲ့ Passive Skill Effect နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ရန်သူတွေက တိုက်ခိုက်တဲ့အခါ Headshot ဒဏ် ကို ၂၅% လျှော့ချပေးပါတယ်။ ရန်သူတွေသူ့ လက်ထဲရောက်ရင်တော့ ဒါကသူ့ Damage ၂၅% ပိုထိစေတယ်။ ဒီ Skill က သင်က အဓိကနေရာတွေလွဲသွားရင်တောင် Damage ပိုတိုးစေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကစားသမားအားလုံးနီးပါးအတွက် အရမ်း အသုံး၀င်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စရင်းကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ? သင်တို့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြသွားကြရင်း တစ်ခြား Character တွေကိုလည်း ဆော့ကြည့်ကြပါအုန်းလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကံကောင်းကြပါစေ! သင့်ရဲ့ Free Fire အကောင့်ကို Codashop မှာ ဖြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ မြန်ဆန် လွယ်ကူပြီး Log-ins ၀င်စရာမလိုပါဘူး။
သင့်ရဲ့ Free Fire အကောင့်ကို Codashop မှာ ဖြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်းအများကြီးရှိတဲ့အပြင် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး လျင်မြန်စွာ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleMOBA ဂိမ်းတွေမှာ အဖွဲ့၀င်ကောင်းတ‌စ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ #SquadGoals
Next articleLeague of Legends: Wild Rift Rune လမ်းညွှန်